Our Program - GETC English Training Centre (English Language School)
ကျွန်တော်တို့ GETC သင်တန်းကျောင်းတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသောသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားသော အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများရှိပါသည်။ သင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အင်္ဂလိပ်စာ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသင့်တော်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် သင်ရိုးနှင့် သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီ စီစဉ်ထားပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်စေရန် GETC မှ အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များထားရှိ၍ သင်ကြားပါမည်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ဖြင့် အခြားသူများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံသည့် စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် လေ့လာသင်ယူရသော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်း၊ ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်များ မတက်မီ လိုအပ်သော အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံကောင်းများ ရရှိစေရန်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးမှတဆင့် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အတွေးအခေါ် အယူအဆများကို မြှင့်တင်ပေးရန်။
မြန်မာ့လူ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိနေသော နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မည့် အရည်အသွေးနှင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးရန်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Cambridge University Press, Oxford University Press, Macmillan Publisher မှထုတ်သော Course Book များဖြင့် သင်ကြားပေးပါမည်။
သင်ကြားမှုတွင် ကျောင်းသားဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်သင်ကြားရေးနည်းကို အခြေခံ၍ Cambridge တက္ကသိုလ်၏ သင်ကြားရေးနည်းစနစ်အတိုင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားပါမည်။
ဆန်းစစ်ဝေဖန်စဉ်းစားမှုကို အားပေးသည့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်များနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို သင်ကြားပေးပါမည်။
အရေးအသားနှင့် လေ့လာမှုစွမ်းရည်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန် သင်ကြားပေးပါမည်။
လူငယ်တစ်ဦးစီ၏ အရည်အချင်းအလိုက် တစ်ဦးချင်းလိုအပ်မည့် ပံ့ပိုးမှုများကို ပေးပါမည်။
အဆင့်များကို ဘယ်လို ခွဲထားပါသလဲ?
သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် Level ၃ ခုမှ ၆ ခု အထိ ခွဲထားပါသည်။ Level တစ်ခုကို နာရီပေါင်း ၆၅ နာရီမှ ၃၆၀ နာရီကြာ သင်ယူရပါသည်။
တိုးတက်မှု ဘယ်လိုအကဲ ဖြတ်သလဲ?
ကျောင်းသား/သူ များ အမှန်တကယ်ပြောဆို၊ ရေးသားလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ အတန်းတွင်းပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် စာမေးပွဲရလဒ်အပေါ် အခြေခံပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သည့်နေ့ မှစ၍ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ တိုးတက်မှု၊ လိုအပ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားမည် ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများ ပေးသွားပါမည်။ သင်တန်းပြီးဆုံး၍ သတ်မှတ်ချက်ပြည့် မှီသော ကျောင်းသားများကို certificate ထုတ်ပေးသွားပါမည်။ (မိဘများအနေဖြင့်လည်း မိမိသားသမီး၏ တိုးတက်မှုနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အတန်းပိုင်ဆရာ/မ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူနှင့် မည်သည့်အချိန်မဆို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။)
မည်သည့်ဘွဲ့ရ ဆရာများနှင့် သင်ကြားပေးပါသလဲ
ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ မဟာဘွဲ့တွေအပြင် Dip in ELTM, Dip in TEFL, Dip in TESOL, CELTA အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အဂ်လိပ် ဘာသာဆရာအဖြစ် သင်တန်းအောင်လက်မှတ် ရရှိထားသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဆရာ၊ ဆရာမ များမှ သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပါသည်။
GETC သင်တန်းကျောင်းမှ ရေးဆွဲထားသော တမူထူးခြားသည့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားမှု အစီအစဉ်သည် လက်ရှိမြန်မာအစိုးရကျောင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းများတွင် တက်ရောက်သင်ယူနေသော အသက် ၅ နှစ် မှ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မိမိ ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် အသံထွက် မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် ပြောရဲ ဆိုရဲ ရှိလာစေရန်။
ကျောင်းစာများကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းများမှများစွာ အထောက်အကူပြုစေရန်။
Cambridge ESOL Exam များကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရာတွင် အခြေခံကောင်းများ ရရှိစေရန်။
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူလေ့လာမှုမှ တစ်ဆင့် ကိုယ်ကျင့် တရားနှင့် စာရိတ္တ၊ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အတွေးအခေါ်နှင့် ဗဟုသုတစသည်တို့ တိုးပွားလာစေရန်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်ကာလနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များ ကမ္ဘာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော အရည်အချင်းကောင်းများ ရရှိလာစေရန်။
အာရှကလေးငယ်များအတွက် အထူးပြုရေးဆွဲထားသော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အဓိကသင်ရိုး စာအုပ်အပြင်၊ ဖြည့်စွက် online သင်ခန်းစာများဖြင့် သင်ကြားပေးပါမည်။ (မိဘများ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့် ကလေးငယ်များ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော Grammar ကို Vocabulary နှင့် တွဲဖက်၍ အထူးပြုသင်ကြားပေးသွားပါမည်။)
ယခုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်တွင် လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေသော Thinking Skill, Presentation Skill, Public Speaking Skill နှင့် EQ Development များကို ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပါမည်။
ဗဟုသုတတိုးပွားစေမည့် အခြားဘာသာရပ်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုများမှ အကြောင်းအရာများနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမှုများကို သိနားလည်စေမည့် Teamwork Project များ ပါဝင်ပါမည်။
သင်ကြားမှုတွင် ကလေးဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်သင်ကြားရေးနည်း (Child-Centred Approach) ကို အခြေခံ၍ ကလေးငယ်များ အသက်အရွယ်လိုက် စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေမည့် နောက်ဆုံးပေါ်သင်ကြား ရေး နည်းစနစ်နှင့် သင်ထောက်ကူပြုပစ္စည်းများ အသုံးပြုထားပါသည်။
ကလေးငယ်တစ်ဦးစီ၏ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ ထွက်ပေါ်စေရန်နှင့် ထိုအရည်အချင်းများကို မှန်ကန်စွာ သုံးတတ်စေရန် တစ်ဦးချင်းအလိုက်လိုအပ်မည့် ပံ့ပိုးမှုများပေးပါမည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မဟာဘွဲ့တွေအပြင် TKT,Dip in ELTM,Dip in TEFl/TEYL, Dip in TESOL, CELTYL အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အဂ်လိပ်ဘာသာဆရာဖြစ် သင်တန်းအောင်လက်မှတ် ရရှိထားသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာ ၊ ဆရာမများ မှ သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။
Level တစ်ခုကို Semester သုံးခုခွဲထားပြီး သင်တန်းကာလ ၉ လ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးငယ်များသည် Semester တစ်ခုစီတွင် နာရီပေါင်း (၆၀) ကြာသင်ယူရပါမည်။
ကလေးငယ်များ အမှန်တကယ်ပြောဆို၊ ရေးသား လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ အတန်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် စာမေးပွဲရလဒ်အပေါ် အခြေခံပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သည့် နေ့မှစ၍ ကလေးငယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှုကို learning portfolios တွင် မှတ်တမ်းတင် ထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးလတစ်ကြိမ် semester တစ်ခုပြီးတိုင်း မိဘများထံသို့ တိုးတက်မှုမှတ်တမ်း တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီသော ကလေးငယ်များကို certificate ထုတ်ပေးသွားမည်။ (မိဘများအနေဖြင့်လည်း မိမိသားသမီးများ၏ တိုးတက်မှုနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အတန်းပိုင် ဆရာမ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူနှင့် မည်သည့်အချိန်မဆို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။)